2. Ta Gar Phwint Htar Mal Ver1 - Shwe Htoo
2. Zin Yaw Ni (Numerical Horoscope)
3. AKonThi News
1. မည့်သည့် item မဆို 50000 ဖိုးအထက်ဝယ်ယူသူတိုင်း 10% - Shawty's Corner
3. ၅ ရာခိုင်နှုန်း Discount - စွန်ရဲနီ
4. Buy above 50000 kyats and GET 5% Discount - Myat Yadanar
1. ၂၀၁၇ - ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို အွန်လိုင်းမှ ကြည့်ရှုနိုင်မည်
2. လှိုင်သာယာ အောင်ဇေယျတံတား အဆင်းတွင် ယာဉ်ထိန်းရဲကို လက်သီးဖြင့် လိုက်ထိုးသူနှစ်ဦးကို ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်မှုဖြင့် အမှုဖွင့်
3. ထိုင်းရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ သေကြောင်းကြံစည်မှု စံချိန်တင်မြင့်တက်လာ
1. အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်လျော့သွားတဲ့ T-ara က အယ်လ်ဘမ်အသစ်မှာ တစ်ဦးချင်းသီဆိုမှုကိုအသား ပေးထား
2. G-Dragon အယ်လ်ဘမ်ဆေးရောင်ကျွတ်လာတဲ့အပေါ် ငြင်းခုံဝေဖန်မှုတွေပေါ်ထွက်
3. (LEAD) F.T. Island အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ ချိန်းတွေ့နေတာကို အတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ ကျွမ်းဘားအလှမယ် ယခုလူကြိုက်အများဆုံး ၀တ္ထုများ
1. မုန်လာချဉ်ပုလင်းကလေး - အစ/အဆုံး
3. ပုလင်းချစ်သူ - Chapter 1
3. 2017 တက္ကသိုလ်​ဝင်​စာ​မေးပွဲ​အေင်​စာရင်း
အဆိုပါ ကွန်ဒို ၁၂ လုံး၏ တည်ဆောက်မှုစီမံကိန်းကာလမှာ သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းတွင် ခေတ်မီအားကစားခန်းမ၊ ရေကူးကန်၊ ဆေးခန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်း၊ ကလေးကစား ကွင်း၊ လမ်းလျှောက် ဈေးများပါ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ တိုက်ခန်းများကို အရစ်ကျစနစ် ဖြင့်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဈေး နှုန်းအနေဖြင့် တစ်ခန်းလျှင် အကြမ်းထည်ငွေကျပ်သိန်း ၈ဝဝ မှကျပ်သိန်း ၄ဝဝဝ ထိ အမျိုး အစားအလိုက် ခွဲထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို ပြည်ဖြိုးထွန်း အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ South Asia International Investment Group Co., Ltd တို့မှ နိုင်ငံ တကာ အတွေ့အကြုံ ရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာများ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များမှ တာဝန်ယူကာ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ DMT
ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်အ တွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်သူလေးဦး ကို ပုသိမ်မြို့နယ်တရားရုံး၌ ဇန် နဝါရီ ၁၀ ရက်က ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ် ဆေးရာတွင် တရားလိုပြ သက် သေလေးဦးကို နံနက် ၁၀ နာရီ ခန့်မှ နေ့လယ် ၁ နာရီခန့်အထိ လေးနာရီကြာ ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ သည်။